Mandehandeha amin'ny lalan'ny Inca malaza mankany Machu Picchu | Vaovao momba ny dia
Betsaka ny lalana mankany amin'ny Machu Picchu fa tsy misy na dia iray aza mahaliana toy ny Inca Trail, ny làlana mpandeha an-tongotra malaza indrindra any amin'ny kaontinanta Amerikana noho ny maha-fombam-panao mpandeha amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Avy any Cuzco, lalana 43 kilometatra mamakivaky ala, tohana vato taloha ary fahitana mahatalanjona. Any amin'ny faran'ny lalan'ny Inca no valisoa aorian'ny diabe: Puerta del Sol malaza sy ny sisa tavela amin'i Machu Picchu, tanàna taloha tamin'ny vanim-potoana Inca no nekena ho ivon-toerana ara-pivavahana, ara-pitantanana ary ara-politika manan-danja naorina eo an-tampon'ny lehibe iray. tendrombohitra.
Ny Inca Trail dia làlana vato naorin'ity sivilizasiona ity taonjato dimy lasa izay hampivondrona ireo mponina miparitaka eran'ny fanjakan'ny Tawantisuyo. Toerana arkeolojika voaaro nefa misokatra amin'ny fizahan-tany izay eo afovoan'ny Andes ary tsy azo aleha amin'ny fiara na amin'ny fomba fitaterana.
Ny Ministeran'ny Kolontsaina Cusco dia miandraikitra ny fandrindrana ny fidirana ary ny toetoetran'ny fitsangatsanganana any Machu Picchu. Izy io ihany koa no miandraikitra ny fikojakojana ny zotra, ny toby, ny fidiovana ary ny fahazoan-dàlana hiditra amin'ity fitoerana masina Andes ity.
Ny famitana ny Inca Trail hisaintsainana ity harena an'ny National Heritage of Peru ity dia traikefa tsy hay hadinoina izay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny fomba fiainan'ireo mponina voalohany tao Machu Picchu.
Toy ny amin'ny làlana fitsangatsanganana be fangatahana be dia be eto ambonin'ny planeta, raha hanao ny Inca Trail dia mila mandamina ny dia mialoha ianao hialana amin'ny tranga tsy ampoizina. Ireto misy torohevitra azo ampiharina izay hanampy anao rehefa manomana an'ity traikefa nahafinaritra ity.
1 Safidio ny fotoana mety hanaovana ny Inca Trail
2 Mamandraha mialoha
3 Safidio ny mpandraharaha tsara indrindra hitsidika an'i Machu Picchu
4 Ahoana no hiomanana amin'ny Inca Trail
5 Fampahalalana mahaliana an'i Machu Picchu
Safidio ny fotoana mety hanaovana ny Inca Trail
anefa Voalamina mandritra ny taona ny vondrona (afa-tsy amin'ny volana febroary rehefa misy oram-batravatra ary mihidy ny lalan'ny Inca noho ny antony fikolokoloana) dia ilaina ny misafidy ny fotoana mety indrindra. Ny volana mety indrindra dia ny volana jona, jolay ary aogositra satria mangatsiaka kokoa sy maina kokoa izy ireo, na dia izy ireo koa aza no be mpitia indrindra. Mba hisorohana ny valalabemandry dia tsara kokoa ny mandeha alohan'ny na aorian'ny fotoanan'ny orana (manomboka amin'ny martsa ka hatramin'ny mey) na ny septambra ka hatramin'ny novambra.
Machu Picchu dia iray amin'ny harem-pirenena amin'ny Heritage National of Peru izay arovan'ny firenena amin'ny zotom-po bebe kokoa. Raha hitsidika azy io dia ilaina ny fahazoan-dàlana alohan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina Peroviana ka mila manomana ity fitsidihana ity mialoha isika mba hiomanana ny fahazoan-dàlana ilaina rehetra. Lazao izany ireo mpandraharaha nahazo alàlana ihany no mahazo ireo fahazoan-dàlana ireo. Ny fahitana ny toerana amin'ny ankapobeny dia azo zahana amin'ny www.camino-inca.com.
Raha te hanao ny làlan'ny Inca isika amin'ny vanim-potoana lehibe (Jona, Jolay ary Aogositra) dia tsara kokoa ny mandamina azy ireo herintaona mialoha. Etsy ankilany, raha ny hitsidika azy amin'ny vanim-potoana ambany no eritreritsika dia ampy ny enim-bolana. Ny làlana maharitra roa andro dia mazàna ihany koa toy ny nangatahana ary ny famandrihana volana mialoha dia mihoatra ny tsy maintsy atao.
Ny safidy tsara indrindra dia ny fanekena amin'ny dia maharitra dimy andro ahafahantsika mankafy ny tontolo ary mahita toerana fitobiana tsy dia be olona. Ilaina ihany koa ny maka fiantohana fitsangantsanganana izay mandrakotra hetsika ivelan'ny trano.
Safidio ny mpandraharaha tsara indrindra hitsidika an'i Machu Picchu
Ny lalan'ny Inca dia tsy afaka atao samirery. Adidy izany hitahiry izany amin'ny alàlan'ny mpandraharaha iray nahazo alàlana satria olona 500 ihany no mahazo miditra isan'andro amin'ilay lalana ary ireo mpandraharaha nahazo alalana no mahazo alalana araka ny fangatahana. Ilaina ny manome ny laharan'ny pasipaoro ary mampiseho izany amin'ny fifehezana eny an-dalana. Raha ny vidiny, eo anelanelan'ny 360 sy 450 euro ireo, saingy miankina amin'ny mpandraharaha sy ny karazana làlana.
Ny fandoavana bebe kokoa dia tsy mitovy dika matetika amin'ny kalitao avo kokoa. Ny tsara indrindra dia ny mifanerasera amin'ireo masoivoho marobe hijerena ny kalitaon'ny serivisin'izy ireo, fitaovana, mpitari-dalana ary porter. Ataovy azo antoka koa fa ny faritra dia ahitana fivarotana, sakafo, fidirana indray andro any amin'ny rava ary fiverenana miverina amin'ny lamasinina.
Anisan'izany ireo mpandraharaha azo antoka: www.amazonas-explorer.com, www.acacari.com, www.aventours.com, www.culturasperu.com, www.explorandes.com, www.ecotrekperu.com, www.peruvianodyssey.com, www.tambotreks.net .
Ahoana no hiomanana amin'ny Inca Trail
Mpandeha maro no miresaka momba ny filàna hatsangana hanao io zotra io. Alohan'ny dia dia tsara ny miomana amin'ny alàlan'ny fandehanana lavitra sy fitsangatsanganana isan-karazany.
Ho an'ny fitaovana hanaovana ny Inca TrailSoso-kevitra ny hanao kiraro baoty efa voafandrika ary tsy manao chafing. Ho an'ny dia lavitra dia ilaina ny mitondra tehina sy kitapo fanampiana vonjy taitra voalohany raha toa ka miseho vetivety ireo blèta mampatahotra.
Ao anaty kitapo dia tsy azonao atao ny tsy mahita tabilao masoandro, satroka, lamba famaohana mandehandeha, trano fisakafoanana, fihinanam-bilona, ​​fanafody famonoana bibikely, atin'akanjo, ba kiraro matevina, pataloha lava, solomaso, fonon-tanana ary palitao nidina.
Fampahalalana mahaliana an'i Machu Picchu
Any amin'ny faritra andrefan'i Amerika atsimo no misy an'i Peroa. Fantatra izany amin'ny alàlan'ny fisian'ny Tendrombohitra Andes, izay mamakivaky ny faritany hatrany avaratra ka hatrany atsimo, manamboatra faritra telo izay samy hafa miharihary toy ny morontsiraka, ny tendrombohitra ary ny ala.
Machu Picchu dia midika hoe tendrombohitra taloha ary nomena anarana ho an'ny toerana misy ny trano mimanda Inca izy io. Ny tranoben'ny maritrano dia namboarin'ny Inca Pachacutec tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary mizara roa ny trano mimanda: ny fambolena, mandrafitra ireo lampihazo, ary ny tanàn-dehibe, izay nahatanteraka ny asan'ny fitantanan-draharaha.
Ny toerana tena misy an'i Machu Picchu dia ao amin'ny faritanin'i Urubamba, 112,5 km avaratra atsinanan'ny tanànan'i Cuzco. Ny mari-pana fanao isan-taona dia 6º C farafaharatsiny ary farafaharatsiny 21º C.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Mandehandeha amin'ilay lalana malaza Inca mankany Machu Picchu